Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-03-07 19:13:59 26
UWu You Edolobheni laseHechi, EsiFundazweni saseGuangxi
Esikhathini esithile esidlule, ibandla langihlelela ukuba ngiyohlala nomndeni owawuzongisingatha ngezizathu zomsebenzi. Uma ngiqala ukuhlanganyela nomfowethu nodadewethu bekhaya elalingisingethe, bathi, “Siyakwesaba kakhulu ukukhuleka uma sihlanganyele nabanye, Siyazi ukuthi sithini uma sizikhulekela sodwa, kodwa uma sekukhulekwa kuhlanganyelwe, sivele singazi ukuthi sithini.” Ngathi uma ngizwa lokhu, ngazicabangela ngathi, “Uma singakhuleki ngesikhathi sihlanganyele ngeke sikwazi ukwamukela uMoya oNgcwele, nokuxhumana ngeke kube yimpumelelo. Kufanele sikhuleke!” Kodwa ngabuye ngacabangisisa, ngacabanga ukuthi uma ngempela bekwesaba ukukhuleka, ngabe ngeke bacabange okuthile ngami uma ngigcizelela ukuba bakhuleke? Ukuze ngigcwalise izibopho zami zokuhlela imibhalo yama-athikhili, kwakuzodingeka ngihlale nomndeni owawungisingethe isikhathi eside.
Ngangizokwenzenjani uma bengibuka ngenye indlela bangabe besafuna ukungihlalisa ekhaya labo ngoba ngingahambisananga nezifiso zabo? Mhlawumbe kwakufanele ngihambisane nezifiso zabo. Ngenxa yalokho-ke, esikhathini senyanga eyalandela, asizange sikhuleke ngesikhathi sokuhlanganyela. Lokhu kwenza ukuxhumana ngamazwi kaNkulunkulu kwaba ngokuphuphile nokudumele nje, futhi kungenakho ukukhanyiseleka okuvela kuMoya oNgcwele. Esikhathini sasiye siphume nasesihlokweni esasikhuluma ngaso. Kancane kancane, isimo sikadadewethu nomfowethu saba ngesingajwayelekile, futhi bengasazimisele ukuba sihlanganyele. Ngisho noma siye sahlanganyela babengquphazela ubuthongo kwathi empilweni yasekuphileni bahluleka ukuqhakambisa ukudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Babebuka umabonakude noma nini lapho bethola isikhathi, futhi bengasenayo imfudumalo engako kimina, sebenqena nokukhuluma nami. Ngibhekene nalesi simo, ngazizwa ngibuhlungu futhi ngididekile: Ngangilandele izifiso zabo kukhona konke, futhi angizange ngibanenge ngalutho. Kwakungani base benjena?
Kwathi lapho sengididekile impela yilesi simo, amazwi kaNkulunkulu angikhanyisela: “Uma ungenabo ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, akunandaba ukuthi wenzani ukuze ulondoloze ubudlelwane bakho nabanye abantu, akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani noma ukuthi ukhipha amandla angakanani kukho, kusengokwefilosofi lempilo yomuntu. Ulondoloza ukuma kwakho phakathi kwabantu ngombono womuntu nefilosofi labantu ukuze bakudumise. Ubudlelwane obujwayelekile nabanye abantu awubakhi ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Uma ungagxili ebudlelwaneni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubudlelwane bakho nabo bonke abanye abantu buyoba ubujwayelekile. …Ubudlelwane obujwayelekile phakathi kwabantu bakhiwe ngesisekelo sokunikela ngenhliziyo yabo kuNkulunkulu; abufinyelelwanga ngemizamo yabantu” (“Kubaluleke Kakhulu Ukwakha Ubudlelwane Obujwayelekile NoNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngenxa yamazwi kaNkulunkulu ngokushesha ngakubona ukukhanya. Empeleni, lesi simo senzeka ngenxa yokuthi ngagxila ngokuwubumpumputhe ekuqhakambiseni ubudlelwane benyama phakathi kwabantu, ngangagxili ekwakheni ubudlelwane obuhle noNkulunkulu. Uma ngibheka emuva ekutheni ngangizwana kanjani nomndeni owawungisingethe, ukuze ngibenze babe nombono omuhle ngami, futhi baqhubeke nokungihlalisa, ngabalandela kukhona konke futhi ngenza konke ukuze ngithandeke kubona, ngakhohlwa ukucabanga ngemigomo yeqiniso noma ukuthi ingabe izenzo zami zingabahlomulisa na. Ngenkathi ngizwa ngokwesaba kwabo ukukhuleka ngesikhathi sokuhlanganyela nabanye abazalwane, angizange ngixoxisane nabo mayelana namaqiniso afanele ukuze ngibasize baqonde incazelo yokubaluleka komkhuleko; kunalokho, ukuze ngivikele izintshisekelo zami, ngabathobela ngacabangela izifiso zabo zokungakhuleki ngesikhathi sokuhlanganyela nabazalwane, nokwenza ukuhlangana nobudlelwane bethu bube obenyama kuphela. Ngenxa yokuthi kwakungenamkhuleko, kungekho kufuna, noma ukunikezela, yayingekho indlela yokufinyelela ekukhanyiselweni nguMoya oNgcwele kanye nokuholwa Nguye ngesikhathi sokuhlanganyela nabazalwane, noma ukuthola ukwesekwa okutholakala ngokudla nokuphuza izwi likaNkulunkulu. Ngenxa yalokho, izimo zethu zaphenduka zaba ngezingajwayelekile, futhi sagcina sesingasakwazi ukuba nobudlelwane obujwayelekile. Ngangazi kahle ngokubaluleka komkhuleko. Umkhuleko usiza abantu banyakaziswe nguMoya oNgcwele, futhi uyindlela yokuba uMoya oNgcwele asebenze. Umkhuleko ungasisiza sithole ukukhanyiseleka okuthe xaxa kuMoya oNgcwele ukuze siqonde kangcono iqiniso. Phezu kwalokho, ukukhuleka ngaphambi kokuhlanganyela njengabazalwane yindlela yokukhombisa indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yomuntu, ukukhombisa ukuthi umuntu uyamhlonipha uNkulunkulu phezu kwakho konke. Kodwa ngangisaqhuba ngezimfundiso zikaSathane empilweni— “Yibani nokuhlakanipha kwezwe ukuze nikwazi ukuphila kulo mhlaba” —ngayeka umkhuleko ngakhetha ubudlelwane benyama. Lokhu kwakhombisa ukuthi ngangingenayo indawo kaNkulunkulu nhlobo enhliziyweni yami, futhi ngangisibekelwe yimfundiso kaSathane ngaphakathi kimina. Ngaso sonke isikhathi ngangizama ukugcina ubudlelwane obuhle nabantu—lokhu kuziphatha kwakuhambisana nokuzithathela ngokuphelele imfundiso enobusathane. — “Yibani nokuhlakanipha kwezwe ukuze nikwazi ukuphila kulo mhlaba.”
Kwangcolisa inhliziyo nomphefumulo wami, okwangenza ngaba yigwala, ngazicabangela ngedwa futhi ngenza okunyanyekayo, nokwaholela ekubeni ngingabi nabulungiswa, futhi ngingakwazi ukuphila iqiniso. Ngakhumbula ezikhathini eziningi ngaphambilini lapho ngamelana noNkulunkulu ngikhuthazwa umuzwa wokuzivikela: Ngenkathi ngihola ibandla, ngabona abantu besabalalisa imibono ethile, besabalalisa imicabango emibi, bephazamisa impilo yebandla, kodwa angaze ngabanqanda, ngoba ngisaba ukuthi engingakusho kungalimaza izintshisekelo zami. Ekwengameleni umsebenzi wevangeli, ngahlehla lapho nje odade nabafowethu bekhonona ngokuthi izinto zazinzima, ngingalokothi ngicela okungaphezu kwalokho, ngesaba ukuthi ngizobacanula bese begcina bengasangithandi. Ngokwenza lokho, ngenza ukuba ivangeli lethu lingasebenzi ngempumelelo. Ngisebenza nethimba elalibhekelele ukuhlelwa kwama-athikhili, ngaqaphela ukuthi udadewethu engangisebenza naye wayengazimisele kangako ngomsebenzi wakhe kodwa ngesaba ukumtshela lokho, ngenxa yokwesaba ukuthi uzongenami bese eba nemicabango ethile ngami bese kuthikamezeka ubungani bethu. …. Kwaba kulesi sikhathi, lapho ngabona khona ngokucacile ukuthi kukhona konke engikwenzayo, ngaso sonke isikhathi ngangigxile ekutheni bazongibuka noma bangithathe kanjani. Ngalungiselela indawo yami negama lami ezinhliziyweni zabantu, ngabala engangizokuzuza nokwakuzongilahlekela. Kungashiwo nje ukuthi ngangiphila ngokuphelele ngemfundiso kaSathane ethi “Yibani nokuhlakanipha kwezwe ukuze nikwazi ukuphila kulo mhlaba. ” Kwase kuphenduke umgomo wezenzo zami, isisekelo sokuthi ngangisebenza kanjani njengomuntu. UNkulunkulu ucela abantu ukuba bazinikele ekulweleni ubulungiswa neqiniso, ukuba nesibindi sokunganikezeli emandleni obumnyama, kanye nokuba bame baqine kwabakukholelwayo, bangalandeli izixuku, noma baninge ngezinto zokungalungi. Noma kunjalo, imfundiso enobusathane ethi “Yibani nokuhlakanipha kwezwe ukuze nikwazi ukuphila kulo mhlaba” iyalela ngendlela engalungile yokuba abantu babe ngabazicabangela bodwa futhi balalele amandla obumnyama. Bangabuki umgomo noma isikhundla kunoma yini abayenzayo, kodwa kuphela ukuthi ingabe kuzoletha inzuzo na kubona. Le mfundiso enobusathane ethi “Yibani nokuhlakanipha kwezwe ukuze nikwazi ukuphila kulo mhlaba” umgomo omubi ophikisana ngokuphelele neqiniso—ithuluzi elisetshenziswa uSathane ukukhohlakalisa abantu. Ngenxa yokuphila ngalo mgomo, abantu baya ngokuya beba ngabakhohlisayo, abanobuqili, abanobugovu, kanye nabonakele. Baya ngokuya kancane belahlekelwa yilezo zici ezinhle ezakha umuntu wangokoqobo. Imfundiso enobusathane iwumgibe futhi iyalimaza. Angifuni nokuphinde ngiphile ngale mfundiso futhi! Ngithe uma kungicacela konke lokhu, ngakhuluma nodade nomfowethu bomndeni owawungisingethe mayelana neqiniso ngomkhuleko. Kuthe uma sebeqonda incazelo nokubaluleka komkhuleko, baba nokuzimisela ukukhuleka ngesikhathi sokuhlanganyela kwabazalwane futhi, ngenxa yalokho, isimo sabo sashintsha.
Ngibhekene nesimo nobunjalo baso, ngafunda ukuthi ukuphila ngezimfundiso ezinobusathane kunobungozi ngayo yonke indlela ongayicabanga. Kusukela manje kuya phambili, ngiyafunga ukuthi ngizolandelela iqiniso ngenhliziyo yami yonke, ngikwazi ukubona phakathi kwazo zonke izimfundiso zobusathane ebese ngizifundile, futhi ngiyeke ukuphila ngokulandela lezi zimfundiso. Ngifuna ukudedela uNkulunkulu, kanye nezwi likaNkulunkulu libuse enhliziyweni yami futhi lingilawule. Iqiniso alibe umbusi wenhliziyo yami ukuze ngiphile ngezwi likaNkulunkulu kukho konke.
Okwedlule: Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
Okulandelayo: Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu